Ogaden News Agency (ONA) – Manchester – Hawlaha Ururka Dhalinyarada –OYSU- oo si habsami ah uga socda caalamka
Manchester – Hawlaha Ururka Dhalinyarada –OYSU- oo si habsami ah uga socda caalamka
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) ayaa barnaamijyo madalaysan bilwalba ka bilaabay inay si wadajir ah uga abaabulaan dunida dacaladeeda ay uga ugu talagaleen inuu isku waqti qabsoomo. Barnaamijyada ururka ayaa isugu jira wacyigalin iyo xogwarano.
Habeenkii Jimcaha ee bishan April 23keedii ayay barnaamij wacyigalin diini ah ay meelkasta isugu yimaadeen iyagoo ka faa’idaysanaya culimada, si la’isugu xidhi dhaqdhaqaaqa dhalinyarada iyo culumada iyo aqoonyahanka umadda.
Waxaa magaalada Manchester lagu qabtay kulan balaadhan oo sidoo kale muxaadaro Diini ah ay isugu yimaadeen Ururka OYSU faraca greater Manchester. Muxadaradaas oo looga hadlay mawduucyo la xiriira dhalinta. kulankan ayaa ahaa kulankii labaad ee ururka dhalinta Greater manchester ay ku qabtaan magaalada Manchester.
Muxaadaradan ayaa aheyd mid sisiman uga dhacday Gobolada wadanka UK iyo guud ahaanba Caalamka. Gabadh ka tirsan ururka OYSU UK faraca Manchester walaal Caaliya ayaa waxay u sheegtay xubnihii fadhiyay shirka in sababta kulanka loo sameyay iyadoo tidhi “dhalinta faracyada OYSU waxay fuliyaan bilkasta halmashruuc oo sisiman halmar looga fuliyo qaaradaha iyo heerarka wadan taas oo ay micnaheedu tahay in lagu wacyi galiyo dhalinta da’yarta ah iyo guud ahaanba bulshada kasoo jeeda somalida Ogadeniya.
Sidoo kale magaalada Doxa ee dalka Qatar ayay dhalinyarada isugu yimaadeen shir kaa la mid ah oo dhalinyara badan iyo dad culuma ahba ay ka soo qayb galeen. Waxaa shirka oo uu ka soo qaybgalay HWF ururka lagaga hadlay waxyaabo aad u qiimo badan, sida khayraadka Ogaadeeniya, dhibaatadda uu gumaysigu ku hayo shacabka S.Ogaadeeniya, xaalada abaaraha ee maanta kajirta wadanka.
Darsigii diiniga ah oo siwanaagsan u gilgilay dhamaan dadkii soo xadiray kulanka ayaa aad u saameeyay dhalintii goobta iskugu timid iyagoo dhamaantood ay ka muuqatay inay kaalintooda buuxiyaan oy shacabka dulman ee S.Ogadenya is-garab taagayaan sidii dalkooda hooyo looga xorayn lahaa cadawga kusoo duulay ee nafla caariga ah,,,
Warfaafinta Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya iyagoo matalaya Gudoomiyaha ururka, xubnaha Golaha Fulinta iyo Golaha dhexe waxay ku bogaadinayaan Ururka Dhalinyarada Ogadenya kaalinta muuqata ee uu halganka ka qaadanayo.
ascw salaan kadib waxaan u mahad celinayaa sida qiimahabadn ee ay u dadaalayaan oysu waxaana ilaahay ooga baryayaa in aanu guulaysano dhamaantaana oo aan helo xornimo iyo guul aan gaarno